Allgedo.com » 2010 » March » 07
Home » Archive Daily March 7th, 2010
Gedo isku tashataye, yuu sugayaa mamul u samaynta degmooynka Caabudwaaq, Dhabad iyo Balanbale?
Markaan fiirino todobo iyo tobankii sano oo dawlad la,aantu jirtay waxaan arkaynaa in somaalidu u kala baxaday deegaano horumar sameeyay xaga maamulka sida qoloyinka la baxay somaaliland ama puntland xataa deeagaanka gedo oo ahay d meel dhibaatooyin badan oo ayaan daro ah ay ka dhaceen ay hada ka gudbeen loona sameeyay lixda degmo ee gobalka mamul loo dhan yahay. Sidoo kale, kismaayo waxay...
Xasuusta Noloshii Ugu Dambaysay ee Wariye C/qaadir Mahad Macalin “Kaskey”
Bartamihii 2005tii ayay ahayd markii Allaha u naxariistee wariye C/qaadir Mahad Macalin Kaskey si toos ah uga soo dhexmuuqday mihnadaha Saxaafada islamrkaana uu u shaqa bilaabay qaar ka mid ah Idaacadaha ka hawl gala Koofurta dalka Soomaaliya, taasi oo ay ugu horaysay Idaacada Banaadir oo uu wakiil uga noqday...
IDAAJAA MUXUU KA YIDHI GEERIDII CABDIQAADIR YAMYAM
Yamyam: Gabyaa Laqmaday! BY Axmed F. Cali “Idaajaa” Toddobaadkii ugu dambeeyey bishii Agoosto ee sannadkan 2005 ayaan kula kulmay Nayroobi; isaga oo markaas u ballansan inuu, saddex maalmood dabadood, u duulo Columbus, Ohio. Wuxuu ku guuleystey inuu ka mid noqdo Soomaalida boqollaalka ah ee bishii ama labadii biloodba mar halkan dayuuradaha lagaga guro; iyada oo aad mooddo in dadkana...
Prayer Time (Waqtiga Salaadda)
Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide (Waqtiga salaadda laga tukado 6 Million oo magaalo ee aduun weynaha.) Si aad si sahal ah ula socoto waqtiga salaadda laga tukado 6 Million oo magaalo oo adduun weynaha ah, riix Halkan ama booqo website-ka uu cinwaankiisu yahay: http://www.islamicfinder.org/world.php Read More →
Macluumaad badan oo Islamka la xariira halkan ka akhriso
Booqo Shabakadda Daarulcilmi.com: HALKAAN KALASOCO DURUUSIHII UGU DANBEEYEY IYO VIDEO-YADII UGU DANBEEYEY Read More →